LAZ joins calls for Chibesakunda to go - Zambian Watchdog
4 July 2013 07:43
The Law Association of Zambia (LAZ) says it is wrong for Acting Chief Justice Lombe Chibesakunda to continue holding her position when she no longer qualifies to hold the highest judicial office.
Law Association of Zambia president James Banda Phiri has told Qfm news in an interview that his association is on record opposing Justice Chibesakunda’s continued occupancy of the Chief Justice’ office.
Mr. Banda added that Justice Chibesakunda does not show concern over the many wrongs that have been going on in the judiciary from the time that she took up her position.
He noted that the general public will lose confidence in the judiciary, especially that Justice Chibesakunda is also related to people in the executive which makes it worse for her to execute her duties professionally.
LAZ says Chibesakunda’s decisions will now be null and void
Chipolopolo to engage Senegal in Paris friendly